Zvigadzirwa zveWebhu - Semalt Advice
Scraper (Google Chrome kuwedzerwa)
Vanhu vakasiyana-siyana vasina vadzidzisi uye vanozvimirira vanoda Scraper pamusana pezvinhu zvisingaenzaniswi zvekucheka kwezvinhu - fidelity property master. Izvi zvinotungamirirwa neDI data vesayenzi zvinogona kuparadzira zvose zviri zviviri uye zvakanyanya mapeji ewebhu uye vane technikiti yekudzidza yakawanda yekuita kuti basa rako rive nyore. Iyi pepanti yakanyatsorongedzerwa kuti ibvise zvinyorwa kubva kuAmazon, eBay, nedzimwe masaiti akafanana uye ine nzvimbo yakaiswa spam kuonekwa. Nezvo, unogona kuona nyore nyore spam mu data yako uye unogona kuibvisa mukati meminiti kana maviri. Iine bhaibheri reraibhurari yeGoogle API yepamutauro yepamusoro yedhadharo ye data uye inochengetedza ruzivo rwako mune dhesi yayo. Iwe unogonawo kuchengetedza dhidhiki ku drag drive yako kana chero imwe sarudzo yekusarudza.
Nekutumira. Io, iwe haufaniri kunge uine unyanzvi hwepfungwa uye unogona kutsvaga dhidhi yepamusoro yepamusoro nguva dzose. Iyi webhupu yehutsva yakashandura ichiti yakaderedza kudiwa kwevasingaiti purogiramu nemasayendisiti e data. Sezvatinoziva kuti deta rezvese inoda zvidzidzo uye mathematics, unyanzvi hwekugadzira, asi haufaniri kudzidza chinhu chipi zvacho kana uri kushandisa chinyorwa. io. Ichi chishandiso chakakodzera kune vanhu vaviri uye mabhizinesi.
Kimono Labs ndiyo yakasununguka-inomira-yega web web scraping software. Inogona kudonha deta kubva kune nhamba yakawanda yemasiti mukati memaminitsi. Inouya mune zvose zviripo uye yakabhadharwa shanduro uye yakakodzera kune vanhu vasiri teknolojia. Na Kimono Labs, haufaniri kudzidza Python kana chero imwe shanduro yemutauro. Zvikwata zvaro zvakagadzirwa kare zvinokubatsira kuti unyore data yako kana mapeji akasiyana ewebhu. Iwe unotofanira kutora uye kuisa purogiramu iyi uye rega Kimono Labs atsvake data iwe munyaya yemaminitsi. Yaro gore-based breathing inokuita kuti ugoverane ruzivo pakati pemichina yakasiyana nyore uye nokukurumidza. Kimono Labs iri kushandiswa nemabhizimisi, vatapi venhau, vatengesi vepaIndaneti, masangano ekuterevhizheni, uye vashandi vekufambisa zvakanyanya.
Facebook ne Twitter API
Dhiyabhorosi dambudziko ndiro dambudziko guru kune webmasters vakasiyana-siyana nevamwe vasina teknolojia. Nokudaro, vanowanzoshandisa Twitter na Facebook APIs kuti vawane deta yavo. IA APIs inotibatsira kuti tibvise ruzivo rwakakosha kubva kune mawebhusayithi akasiyana-siyana uye blogs, uye inofanotaura nezvekugadzirisa uye kuchengetedza data kana yakanyatsorongedzwa. Chikamu chakanaka ndechekuti APIs inogona kugovera zvigadzirwa zvewebhu pazviri nyore, nenzira yakagadzika uye inooneka. Vanopa maonero akanaka e data yakatsvaga, vanoisarudzira muzvikamu zvakasiyana, kana kutumira kune zvakasiyana-siyana zvemafaira maererano nezvido zvedu uye zvido zvedu. Iwe unofanirwa kushandisa shanduko dzeApp media API kana uri munhu asiri technichi asina unyanzvi hwekugadzira.